नेपाली डाक्टरले संसार हल्लाए: मृत मानिसको मुटु झिकेर जीउँदोमा प्रत्यारोपण ? सम्मान स्वरुप एक एक शेयर गराै ! - Dainik Plus
नेपाली डाक्टरले संसार हल्लाए: मृत मानिसको मुटु झिकेर जीउँदोमा प्रत्यारोपण ? सम्मान स्वरुप एक एक शेयर गराै !
By Dainik Plus On September 29, 2019 In Featured, Health
आर्यूवेदिक उपचार: पिनास हुदा खान हुने र नहुने
एकै पटक चम्ल्याहा (चार शिशु)लाई जन्मदिएकी खगित्रा शाही ४ छोरा छोरीलाई हेर्नुहोस । आमालाई डेँगु लाग्यो । बुवा भन्छन्-बच्चा फाल्न आँटेका थियौं …..(हेर्नुहोस् पुरा बिवरण भिडियो )